Madax ka socday Hay’adda MSF oo Muqdisho kula kulmay masuuliyiinta Wasaaradda Qorsheynta Soomaaliya – Hornafrik Media Network
Madax ka socday Hay’adda MSF oo Muqdisho kula kulmay masuuliyiinta Wasaaradda Qorsheynta Soomaaliya
By HornAfrik	 On Jan 26, 2019
Muqdisho (Hornafrik) Xoghayaha joogtada ah ee Wasaaradda Qorsheynta iyo Agaasimeyaasha waaxyaha kulan la qaateen Madaxa Hay’adaha MSF ee Soomaaliya.
Kulanka oo socday mudo sadax saacadooda ah ayaa waxaa looga hadlay howlaha Hay’ada dhaqaatiirta aan xaduuda lehyn (MSF) Soomaaliya ay ka wado, hanaanka ay u socdaan Mashaariicdan dhinaca caafimaadka, Iyada_oo kulanka ay goobjoog ka ahaayen Madaxda Wasaaradda iyo Masuuliyiinta Hay’ada MSF.
Xoghayaha joogtada ah ee Wasaarada Qorsheynta,Maalgshiga iyo Horuamrinta Dhaqalaha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdulqaadir Aadan Maxamed ayaa ku bogaadiyay hay’ada Dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn ee (MSF) howlaha ay ka wadaan dalkeena in dib u bilaabaan tan iyo sanadkii 2013 ka dib.
“Waxaan marka hore soo dhaweynaa in howlahii hay’adan ay ka waday Soomaaliya in dib ay u bilaawdo ka dib markii ay hay’dan ay hakisay sanadkii 2013 shaqadii dalka ka waday sababla xariira in shaqaalaheeda dhibaato la kulmeen, waxaan hada ay bilaaben shaqada ay ka wadaan dalka inagoo taooyin ka siinay qaabka dalkeena xiligan u howlgalayo in ay dar dargailyaan shaqadooda ayuu yari Xoghayaha.
Sidoo kale Xoghayaha joogtada ah ee Wasaaradda Qorsheynta ayaa sheegay in ay ka wada haldleen Istaaraatijiyada 2019 ee hay’adan ay uga howlgaleyso qorshaheeda Soomaaliya iyo sidii looga saleyn lahaa baahiyaha caafimaad ay wadaan kuwa ahmiyd u leh shacabka Soomaaliyeed.
“waxaan isla garanay in ay noo soo gudbiyaan istaraatijiyada sanadka 2019 shaqooyinka dhinaca caafimaadka dalkeena iyadoo qorshahooda u gudbin doonan Wasaaradda Caadimaadka dalka, Sidoo kale waxaan isla garanay in dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee dalka u dhashay in ay siiyaan Tababaro la xariira howlaha Cafimaad sida qaliinka iyo cudurada guud in ay ku howlgalaan ayuu yari Xoghayaha Joogta ah ee Wasaaradda.
Madaxa Hay’ada Dhaqaatiirta aan Xaduuda Lahayn ee MSF ayaa soo dhaweeyay hanaanka ay u socdaan geedi socodka shaqooyinka Soomaaliya ee dhinaca samafalka ah, taalabo wanaagsan ku tilmaamay sida ay ula xisaabtameyso Wasaaradda Qorsheynta Hay’adaha gar gaarka isla amrkaana la ogaanayo shaqooyinka ay ka wadaan Soomaaliya.
Kulanka oo ka dhacay xarunta Wasaaradda Qorsheynta ayaa tilmaamo ka baxinayo dadaalaada kala duwan ee Wasaaradda ay wado ee muga leh ee dhinaca la xisaabtanka hay’adaha iyo ka warqabka hay’adaha ka howlgala dalkeena si loo ogaado shaqooyinka dalka ay ka wadan isla amrkaana shaqooyinkaasi lagu saleeyo baahiyaha umadda Soomaaliyeed.
Wasaaradda Cadaaladda oo tababar u furtay Haween ka kala socday degmooyinka gobolka Banaadir
Daawo Sawirro:-Munaasabadda Caleema saarka ee Madaxweynaha cusub ee Puntland.